Ambatovy : fandaharanasa fitantanana ny haren-javaboary | NewsMada
Ambatovy : fandaharanasa fitantanana ny haren-javaboary
Dingana manan_danja iray lehibe ny vita ao Ambatovy, ao anatin’ny fandaharanasa fitantanana ny haren-javaboary miavaka. Nampidirina ny karazan-javamaniry 49 ho ao anatin’ny lisitra mena an’ny IUCN. Natao io nandritra ny atrikasa fankatoavana izay nokarakarain’ny Vondron’ny manam-pahaizana manokana momba ny zavamaniry eto Madagasikara (GSPM), miaraka amin’ny fanohanan’ny Missouri Botanical Garden (MBG), tao Antaninarenina ny 23 sy 24 janoary 2017.
« Ny fankatoavana ity fanasokajiana ity, hahafahanay manao tomban’ezaka amin’ireo dingana efa vita eo amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ary manitsy ireo asa hafa izay mbola hotanterahina amin’ny manaraka, raha toa ka ilaina. Hahatrarana ny tanjona napetrak’Ambatovy izany mba tsy hisian’ny fahaverezana amin’ireo haren-javaboaary ireo, fa hahazoana tombony aza. Hanaovana drafi-piarovana manokana ireo karazan-javamaniry ireo aorian’izao ; hazo sy ôrkidea tsy fahita raha tsy eto an-toerana ny ankabeazany », hoy ny tompon’andraikitra misahana ny fanonerana eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana ao Ambatovy, Razafindramanana Josia.
Fantarina mialoha miaraka amin’ny MBG
Fanisana amin’ny fomba feno, indrindra mahakasika ny toetoetry ny fiarovana ny zavamaniry sy zavamananaina manerana izao tontolo izao, ny lisitra mena an’ny IUCN ; tondro manan-danja eo amin’ny fanaraha-maso ny toetoetry ny haren-javaboary. Nahafahana namantatra ireo karazan-javamaniry ireo ny fanombanana mialoha notanterahin’ny Missouri Botanical Garden, miara-miasa amin’Ambatovy eo amin’ny fampiharana ny fandaharanasa fitantanana ny haren-javaboary. Natolotra ny Vondron’ny manam-pahaizana manokana momba ny zavamaniry eto Madagasikara nandritra ny atrikasa ny vokatry ny fanombanana mialoha, hahafahan’izy ireo manamarina sy manatsara izay mety hilaina. Rafitra nomen’ny IUCN alalana ny GSPM hanao fanombanana ny toetoetry ny fiarovana ny zavamaniry eto Madagasikara.
Tsiahivina fa mitazona ny teniny hampihena ny fiantraikan’ny asany eo amin’ny tontolo iainana Ambatovy ary manana fandaharanasa feno fiarovana izany. Manatanteraka asa goavana fanavotana sy famindrana ireo karazan-javamaniry ao amin’ny “Arboretum” na ireo faritra harenina, noho izany, ny orinasa, ary manatontosa ny atao hoe “cryoconservation”, “micropropagation” sy ny fikajiana ireo karazan-javamaniry ao amin’ireo faritra izay tantanin’Ambatovy.